कस्ता ब्यक्तिले गर्न सक्छन बलत्कार ? यस्ता छ्न मनोबैज्ञानिक कारणहरु – Himalitimes
कस्ता ब्यक्तिले गर्न सक्छन बलत्कार ? यस्ता छ्न मनोबैज्ञानिक कारणहरु
- गोपाल ढकाल , मनोबिद
२०७७ आश्विन १५ ०४:३४ मा प्रकाशित
पछिल्लो समय हत्या ,हिंसा, बलात्कार जस्ता जखन्य अपराधका घटनाहरु दिनानुदिन बढदै गइरहेका छन।
यस्ता घटनाहरु किन हुन्छन ? यसका पछाडीको मनोबैज्ञानिक कारणहरु के – के हुन सक्छन हेर्नुहोस …
असामाजिक ब्यक्तित्ब : जसलाई साईकोपाथ भनेर पनि भनिन्छ । यस्तो ब्यक्तित्बसगँ सम्बन्धित मानसिक रोग लागेका ब्यक्तिहरुले आफ्नो घरपरिबार र समाजमा जो सुकैलाई पनि दुख दिने ,सानो सानो कुरामा पनि ठूलो बदला लिन खोज्ने, हत्या बलत्कार गर्न समेत पछि नपर्ने आदि जस्ता कानुनले बर्जित गरेका जघन्य अपराध गर्न पछि पर्दैनन् ।
हिमानी शाहको आज ४५ औं शुभ जन्मदिन, शुभकामना दिनेको ओइरो